Hajo Andrianainarivelo | Pakysse
Archive for the ‘Hajo Andrianainarivelo’ Category
Tsy tokony matikambo, miseo milay, ny gasin’andafy mpisolo vavan’ny tery saina Henry Rabary Njaka?
juillet 24, 2014 in 2014, Ady Hevitra, Fanapareham-pahefana, Fandraisana andraikitra, Fanehoana hevitra, Fangalarana ny volam-panjakana, Fiainam-pirenena, Fomba Fisainana Mivelatra, Hajo Andrianainarivelo, Internautes, internet, Madagasikara, Mpanao politika, Olom-pirenena, Politika, Revolution web2.0, T4D-M4D, Toe-tsaina mila miova, Vaovao tatsy sy taroa, Web 2.0
Izy no Henry Rabary Njaka aminy; ilay mpisolo vava nitory, nefa tsy naharesy ny namana blogger Alain Rajaonarivony
Ny zavatra mahatalanjona eto Madagasikara, dia ny fitiavan’ireo politisianina mirediredy, miseo milay te ampiseo fa manana loha malemy efa mikantona, nefa ny mifanohitra ny amin’izay no hita soritra. Izany hoe: « poakaty, tsy misy valera, eo amin’ny sehatrin’ny fitadiavana ny soa sy ny tsara ho an’ny firenena ary ny vahoaka ao aminy. »
Raha tsiahivina vetivety, ho antsika namana sy tapaka mpanaraka ity blog ity. I Henry Rabary Njaka dia ny tale kabinetran’ingahy filoham-pirenena, tsy manana rafitra ara-politika Hery Rajaonarimampianina.
Ho anareo izay tsy mahalala tsara an’ingahy tale, dia izy ilay mpisolo vavan’i Hajo Andrianainarivelo. Ilay mpisolo vava, tsy naharesy (Tsy nahazo gain de cause) nitory ny blogger namana Alain Rajaonarivony, izay monina any Frantsa. Nikasika ny tantaran’i Tompokovavy Nadine Ramaroson (Miala tsiny amin’ny fianakaviana, manonona ny anarany tompokovavy)
Raha atao dika tsotra moa izany dia mpisolo vavan’ireo tery saina ny anton’asan’i Henry Rabary Njaka. Ny antony hilazana izany, dia ny fasahian’ity olombelona iray ity milaza fa amin’ny maha tany tan-dalana an’i Madagasikara, dia tsy olana ny fanagadrana mpanao gazety tradisionaly (mpiasany gazety tradisionaly Matin) rehefa mihoatra ny fefy. Izany hoe: « Rehefa tsy mety amin’ny sitrapon’ny mpitondra ny fanehoana ny hevitra, dia azo atao ny manao, ny didy jadona »
Fihetsika mampahonena tanteraka, raha olona tsy niaina, miseo mahafantatra ny zava-misy eto amin’ny firenena no andeha ampiseo ambo, sy mampiasa voambolana tsy manaraka ny vanim-potoanan’ny taona arivo fahatelo.
Hoy ry zalahy tapaka sy namana ao amin’ny takelaka « facebook » Leo Politika Maloto mikasika ny fitondrana Rajaonarimampianina, manao hoe : ».. »
« Hatsipy ny tady eny an-tandrokin’ny Omby, ary ny teny eny am-pon’ny mahalala » ry ngahy gasin’andafy mpisolo vavan’ireo tery saina. Soa ihany fa solafaka ianao ka maniry anao, hahay hamindra, ra Henry Bary Njaka. Rehefa manao zavatra na maneho hevitra dia mba ataovy misy famakafakana lalina fa tsy manao « politique partisane » ariary zato am-pandriana akory.
Rehefa tsy mahazaka ny fahafahana miteny dia mitondrà penina sy taratasy, fa tsy olana ho ahy ny hanome lesona maimaim-poana, nohon’ny fitiavako mizara ny soa sy ny tsara ho an’ireo mpiarabelona amiko. Ary aza adino rangahy fa Samy nosoran’ny reniny menaka eto, ka tsy Gasy Vao Tonga (GVT) no andeha hampianatra anay ny atao hoe tany tan-dalana eto Madagasikara.
Raha tianao ny mitady rihatra, tia hanindry, hampiasa io fahefana kely tsy misy fototra eo am-pelantananao io. Alefaso fa masahy mandray andraikitra hatrany amin’ny fahafatesana ny tena nohon’ny fitiavan-tanindrazana. Ary raha mbola tsy mahafantatra ny asa, efa nataoko sy nosahaniko niaraka ireo olom-pirenena tsotra lasa « journalistes citoyens » miisa 500 manerana ny Nosy, niaraka nampiroborobo ny tontolon’ny blogging, WEB2.0 teto amin’ny firenena ianao. Dia afaka ampafahantariko izany!
Tsy dia fombako sy toetrako, ny mampidera taimby. Fa raha ilaina dia afaka mifampizesta isika. Izaho sa ianao no nahavita zavatra betsaka, nitondra fanovana teto amin’ny firenena, amin’ny fampiasana ny internet (Changement social/Réseau social). Teo amin’ny lafiny fampiroboroboana ny fahalalahana maneho hevitra sy miteny.
Ny teny famaranana dia tsotra: Rehefa tsy zakanareo ilay fitondrana, dia aza miseo Milay. Tsy tokony amin’izao vanim-potoana izao intsony, no misy olombelona miditra Any am-ponja nohon’ny fanehoana hevitra.
#T4D: Technology 4 Development
#M4D: Madagascar 4 Development